Ungayithenga njani i-Bitcoin kwi-Coinbase kwaye uphumelele i-10 yeedola mahala kubhaliso lwakho! | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Imali engezantsi yedijithali, Te knoloji
I-BitcoinEyona ndawo isetyenziswayo nesaziwa kakhulu namhlanje, ibeyimodeli ekufuneka siyilandele, kwaye okwangoku kwimarike sinokufumana ii-cryptocurrensets ezahlukileyo, ii-cryptocurrensets ezinamaxabiso asezantsi kakhulu kunoko sinokukufumana ngoku kwiBitcoin, iBitcoin Ekupheleni konyaka we-2017 inexabiso elingaphezulu kwe-13.000 euro.
Olona qikelelo luqinisekileyo luqinisekisa ukuba le mali yedatha inokuthengisa ngaphezulu kwe-100.000, 2017 yeedola, ixabiso eliphakame kakhulu kwaye elingenakulindeleka, kodwa ngokubona ukukhula okuye kwakho kunyaka ka-XNUMX, zimbalwa izinto ezinokusothusa. Nangona ixabiso liphezulu, ukuba sithobela ulindelo lokukhula, ngoku ingalixesha lokuba thenga iBitcoins, ICoinbase yenye yezonaqonga zibalaseleyo zokwenza njalo. Kwaye ukuba ubhalisa ngale khonkco uya kufumana $ 10 SIMAHLA xa usenza idipozithi yokuqala ye- € 100.
Ngokusebenzisa iCoinbase asinakuthenga i-Bitcoins kuphela, kodwa sinokutyala nakwezinye ii-cryptocurrensets ezinje Ether y Litecoin, ethi kule minyaka idlulileyo ikhule kwaye ibe yenye indlela kwiBitcoin, nangona kusenendlela ende ekusafuneka beyihambile.
1 Ungabhalisa njani ukuthenga i-Bitcoins kwi-Coinbase
2 Ungazithenga njani i-Bitcoins kwi-Coinbase
Ungabhalisa njani ukuthenga i-Bitcoins kwi-Coinbase
Kwindawo yokuqala, sicebisa ukuba sithenge olu hlobo lwemali ikakhulu ngenxa yenkonzo esiyinikwayo, hayi ukuthenga kuphela, kodwa nokubona lithini ixabiso lakho ngexesha lokwenyani, nokuba kungokuya kwiwebhusayithi okanye kusetyenziswa izixhobo zefowuni.
Fumana i- $ 10 yasimahla kubhaliso lwakho kwiCoinbase
Cofa apha ukuze uphumelele i- $ 10 kwi-Coinbase
Siya kwiwebhu www.yiyinksi.com kwaye sivula iakhawunti. Ukwenza oku kuya kufuneka siye kwicala lasekunene lesikrini kwaye Cofa kwiRejista.
Okulandelayo kufuneka ufake igama lethu, ifani, i-imeyile echanekileyo kwaye ukhethe iphasiwedi. Ngale ndlela, kufuneka siyeke ukusebenzisa iipassword eziqhelekileyo eziyi-123456789, ipassword, ipassword kunye nezinye ezithi rhoqo ngonyaka ziqhubeke ukuba zezona zisetyenziswa ngabasebenzisi, ezenza ukuba iiakhawunti zabo zibe sesichengeni ngakumbi kunezabanye abasebenzisi. Ukongeza, ilog yokungena iya kusibonisa ukuba iphasiwedi esiyifakile ikhuselekile okanye, ngokuchaseneyo, kufuneka siyitshintshe. Elona nani lincinci labalinganiswa li-10, phakathi kwamanani, iileta kunye neempawu.
Okokugqibela simakisha ibhokisi andiyiyo irobhothi kunye nebhokisi apho siqinisekisa khona ukuba sineminyaka engaphezu kwe-18 ubudala kwaye Samkela zombini ikhontrakthi yomsebenzisi kunye nomgaqo-nkqubo wabucala.
Kwinyathelo elilandelayo, kufuneka siye kwiakhawunti ye-imeyile ebesiyisebenzisile ukubhalisa kunye qinisekisa i-imeyile yokuqinisekisa into esisandula ukuyifumana.
Ngoku kufuneka sifake inombolo yethu yefowuni ukudibanisa iakhawunti esisandula ukuyenza kwinombolo yefowuni, ukuze nanini na xa siza kwenza intengiselwano, Siya kuthunyelwa ikhowudi yokuqinisekisa esiya kuyifaka kwiwebhu.
Nje ukuba singene kwinombolo yefowuni, siya kuyifumana i-SMS enekhowudi yokuqinisekisa, ikhowudi ekufuneka siyingenise kwiwindow elandelayo.
Ngoku siyigqibile inkqubo, iya kubonisa idatha yepotifoliyo yethu nazo zonke iimali ezigcina imali esinayo, kunye nekoteyishini ngelo xesha.
Ungazithenga njani i-Bitcoins kwi-Coinbase
Ngaphambi kokuqhubeka nokwenza ukuthenga kwethu okokuqala, kufuneka sigqibe ubhaliso ngokuzazisa kunye nokongeza indlela yokubhatala. Ukwenza njalo, siya ezantsi ngasekhohlo kwesikrini kunye necandelo Gcwalisa iakhawunti yakho kwaye ucofe kuqala Qinisekisa isazisi sakho.
Emva koko sikhetha ifayile ye- Uhlobo lwe-ID Sifuna ukusebenzisa: ipaspoti, iphepha-mvume lokuqhuba okanye i-ID yesithombe. Kule meko sikhetha ukuchongwa kweefoto.
Emva koko siya kufumana umyalezo obhaliweyo ngedilesi yewebhu kwi-smartphone yethu, ekuya kuthi ukuba ucinezele kuyo Thumela iifoto zesazisi, iifoto esiza kuzithatha njengoko kuceliwe, okanye sinokusebenzisa ezo sele sizigcinile kwizixhobo zethu.
Nje ukuba siqinisekise ukuba singobani, kufuneka nje yongeza iakhawunti esifuna ukuthenga ngayoNokuba yikhadi letyala okanye iakhawunti yebhanki.
Xa sigqibile konke okusemthethweni, kufuneka siye phezulu kwesikrini kwaye ucofe kuyo Thenga ukuthengisa, Ukuqala ukuthenga zombini i-Bitcoins, i-Ether kunye neLitecoin. Ngeli xesha, siza kuthenga iBitcoins, ke kufuneka khetha i-Bitcoin ngaphakathi kwithebhu yokuThenga.
Emva koko sikhetha indlela yokuhlawula esingene ngaphambili kuyo.
Okokugqibela kufuneka sazise i Inani lama-euro esifuna ukulityala kwi-Bitcoin, iwindow iyakuhlaziya ngokuzenzekelayo ixabiso leeBitcoins ngokwenani eliza kutyalomali, ngokwexabiso langoku.
Ukuqinisekisa ukuthenga, kufuneka ucofe nje Thenga iBitcoin kwangoko.
Kwikholamu yasekunene, iya kubonisa isishwankathelo somsebenzi, apho sinokufumana khona indlela yokuhlawula esetyenzisiweyo, xa sithengile nalapho sifake khona i-Bitcoins efunyenweyo, ethi kule meko ibe sisipaji se-akhawunti esiyivulileyo eCoinbase.
Okokugqibela, ibonisa inani elipheleleyo leeBitcoins esizithengileyo, ikhomishini eCoinbase esihlawulisayo ngenkonzo kwaye iyonke imali esiyityalileyo kwintengiselwano.
Kwaye konke oko. Khumbula ukuba ukuba ubhalisa eCoinbase ngokunqakraza apha Uya kufumana isipho simahla se- $ 10 xa ugqibezela idiphozithi eyi- $ 100 ubuncinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » Imali engezantsi yedijithali » Ungayithenga njani i-Bitcoin kwi-Coinbase (iphumelele i- $ 10 yasimahla)
I-Xiaomi Redmi 5 kunye neRedmi 5 Plus, izithethi ezimbini ezintsha kuluhlu oluphakathi